ezipholile,fudumeza umshini wokupholisa i-pellet for pellets eshisayo
1.Vumela okuphakelayo okuvaliwe komoya, indawo enkulu yomoya engenayo, umphumela opholile opholile.
2.Idivaysi ekhipha izinto ezibonakalayo isebenzisa uhlobo lokubuyisela i-slide, ukugijima okuzinzile nokuthembekile, okusalayo okuncane.
3.Amazinga okushisa epholile we-pellets ngeke abe ngaphezulu kwezinga lokushisa elikhona + 3~ 5 ℃, futhi ilungele izinto zokupholisa izinhlayiyana.
4.Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okulula nokuhlanza, ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Njengoba sonke sazi, pellets zokugcina ezikhiqizwe ifulethi lokufa elishubile zithambile futhi zomswakama emazingeni okushisa aphezulu, ngakho-ke azikwazi ukuthuthwa futhi zigcinwe ngokushesha futhi zidinga ukuthi zipholisiswe kuqala. Ngakho-ke ama-pellets adinga ukulungiswa ukuze kususwe umswakama nokushisa okukhiqizwe esimweni sokuphola nokuthambisa
umshini opholile we-feed pellet usetshenziswa kabanzi ukufanisa nenqubo ye-pelletizing yesitshalo se-pellet feed, okuhlose ngalo ukuvuthwa okwengeziwe kwezinto futhi kuthuthukiswe ikhwalithi ye-pellets yokuphakelwa kanye nokumelana namanzi. Nezimpawu ze-high automation degree nobuchwepheshe obuphambili, umshini wokupholisa we-counterflow pellet uyimishini efanelekile yokukhiqiza yezimboni yokudla okukhethekile emanzini kanye nokudla okuphakeme kwezilwane ezifuywayo.Umshini opholisa nge-pellet une 2 imisebenzi:pholisa izinga lokushisa le-pellet futhi unciphise umswakama we-pellet.I-pellet ephuma emshinini we-pellet isezingeni lokushisa 70 ℃ ～ 90 ℃,nangomshini opholile we-pellet,izinga lokushisa lizoba ngaphansi kwama-3 ℃ ～ 5 ℃ ngenhla kwegumbi lokushisa.Besides,umshini opholile we-feed pellet wenza umswakama wepellet ungaphansi kuka-12,5%, okulungele ukugcinwa nokuhanjiswa kwepellet.
Izici zokuphola kweProerflow feed Pellet
1.Ipholile ye-pellet isebenzisa ithuba lokupholisa umgomo wokupholisa we-pellet wamanje ngomswakama ophezulu wokushisa. Kungayigwema into ephazamisayo ethusayo lapho umoya obandayo uxhumana nezinto ezishisayo, ngaleyo ndlela kungavimba ukubukeka kwe-pellet kukhiqize ama-crazings.
2.Ukupholisa ithangi kwamukela ukwakheka kwe-octagon, okungaqinisekisa ukuthi ukupholisa akukho ma-engeli afile.
3.Vumela okuphakelayo okuvaliwe komoya, indawo enkulu yomoya engenayo, umphumela opholile opholile.
4.Idivaysi ekhipha izinto ezibonakalayo isebenzisa uhlobo lokubuyisela i-slide, ukugijima okuzinzile nokuthembekile, okusalayo okuncane.
5.Amazinga okushisa epholile we-pellets ngeke abe ngaphezulu kwezinga lokushisa elikhona + 3~ 5 ℃, futhi ilungele izinto zokupholisa izinhlayiyana.
6.Ijubane elipholile eliphakeme nomphumela omuhle wokupholisa. Ukuphola kwe-poundts epholile kungapholisa ama-pellets amaningi ngenkathi kugcinwa ikhwalithi ephezulu ye-pellet.
7.Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okulula nokuhlanza, ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Okufanele kuphawulwe kwinqubo Yokuphola?
1. Ukupholisa kungathinta ngqo ikhwalithi yama-pellets wokugcina wokuphakelwa, ngakho-ke kufanele kube inqubo eqhubekayo. Uma ama-pellets ephola ngokushesha, kwakheka imifantu ezingxenyeni ezingaphandle, nakho okungaholela ekuhlolweni okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, nesikhathi esifushane sokupholisa, ingxenye yangaphakathi yamapellethi isafudumele futhi ama-pellets asamanzi futhi anamathe. Futhi ukupholisa kancane kuzokwenza ama-pellets omile kakhulu, nakho okuphumela ekuqhekekeni.
2. Kufanele kuqashelwe ukuthi ama-pellets amancane akhipha ukushisa kanye nomswakama ngokushesha kunama-pellets amakhulu. Ngisho nokusatshalaliswa kwama-pellets endaweni epholile futhi kuthuthukisa inqubo yokupholisa.
3. Sengisho nje, isivinini somoya ekupholiseni kwe-counter kufanele siphakathi 0.8 futhi 1.5 m / s
Amandla weParthrole Polet Cooler Machine wezobuchwepheshe
Imodeli I-VTLN1.5 I-VTLN2.5 VTLN4 I-VTLN6 I-VTLN8
Ivolumu epholile 1.5 m3 2.5 m3 4 m3 6 m3 8 m3
Ukukhiqiza 3 t / h 5 t / h 10 t / h 15 t / h 20 t / h
Amandla asebenzayo 0.75 Kw 1.1 Kw 1.5 Kw 1.5 Kw 1.5 Kw
Amandla we-Airlock 0.37 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw 0.55 Kw